प्रिय कम्रेड ! माफ पाऊँ बन्दाबन्दी उल्लङ्घन गरेकोमा । – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/प्रिय कम्रेड ! माफ पाऊँ बन्दाबन्दी उल्लङ्घन गरेकोमा ।
प्रिय कम्रेड ! माफ पाऊँ बन्दाबन्दी उल्लङ्घन गरेकोमा ।
काभ्रे – प्रिय कम्रेड ! कोरोनाको कहरसँगै सडकमै छु । सडकै सडक हिँन्या छु । लट्ठीको सहारा छ । साथमा भोक छ । भोकै छु । कहिले घामले साथ दिँदै छ । कहिले दिनमा असिनाले त रातमा ओडारले । यस्तै छ मेरो दैनिकी । यस्तै यस्तै दैनिकीबाट अझै पनि तिम्रो कुशलताको कामना ! प्रिय कम्रेड ! माफ पाऊँ बन्दाबन्दी उल्लङ्घन गरेकोमा । यो मेरो बाध्यता हो ।
बाध्यताले यस्तो गर्नु महाभूल हो तर नसकेसि के गर्नु ! हो, तिमी भन्या भनै छौ जो जहाँ छौँ त्यही बसौँ । तिमीलाई समर्थन नगरेको पनि होइन । होम क्वरेण्टीनमा नबसेको पनि होइन केही दिन । तर बसूँ कसरी ? प्रत्येक दिन ज्याला गरी जीवन गुजार्ने अवस्था छ । काम बन्द छ । माम नि बन्दै हुन लाग्यो । काम दिनेले सक्तिन बेहोर्न भन्यो । बस्न त छ तर खान छैन । साथमा लालाबाला छन् ।
सहरमा कहर दिनानुदिन बढ्या बढ्यै छ । तिम्रो राहतको लागि हाम्रो योग्यता नै पुगेन । राहत लिन जाँदा परिचयपत्र खोज्छ, हेर्छ र भोलि आउनु भन्छ । पेट भोकै छ तर ऊ भोलि आउनु भन्छ । विदेशी पनि होइन । यसो गर्दा आफू अनागरिक पो हो कि भनी मुटु दुख्छ । गणतन्त्रको आन्दोलनमा होमिँदाको क्षण सम्झिँदा मुटु भक्कानिएर आउँछ । तिम्रो गणतन्त्रको पालिकाले नचिनेसि कोठामै मर्नुभन्दा त दिनौँ हिँडेर गाउँ जानुको विकल्प देखिनँ कम्रेड !
प्रिय कम्रेड ! हिँड्दा हिँड्दै कति दिन हिँडे । पत्तो छैन । मरिन्छ कि बाँचिन्छ तो नि पत्तो छैन । साथमा जहान छिन् । यसरी दुःख भोग्नुभन्दा त बाटोमै कोरोनाले भेटे हुन्थ्यो नि भन्छिन् घरिघरि उनी । सँगै गइन्थ्यो बरू भन्छिन् । प्रकृति पनि कति निठुर भा’को यतिबेला । कहिले तालु पोल्ने घाम त कहिले गड्याङ्ग गुडुङ्ग अनि बेतोडको हावाहुरी । हिँड्दाहिँड्दै सडकमा फाट्टफुट्ट गाडी आउँछन् । हात दिन्छु । रोक्दैनन् । रोकून् पनि कसरी ! सबैलाई त्रासै त्रास छ । छोरोले कति हिँड्ने बाबा भन्दै गाडी रोक्ने भन्छ । म लाचार छु ।
कतिबेला त बाँचेको नि धिक्कार लाग्छ मलाई । लामका लाम मान्छे बाँच्ने आशमा हिँड्या हिँड्यै छन् बेसाहारा भएर । बाटाँ पुलिसले नि हकार्छ, नजाऊ भन्छ । जाने कता भन्दा नि बोल्दैनन् । बरू उल्टै किन आ’को भन्छ । सिंहदरबारकै भाषा बोल्छ उसले पनि । ऊ पर पसल खुल्या छ बा ! छोराले भनी नसक्दै आफूलाई सोला छुट्छ, रित्तो गोजी भएर ! तैपनि बाटाँ हिँड्दा हिँड्दै कतै चाउचाउ, कतै बिस्कुट त कतै पानी राखेर भगवानका थरिथरि रुपले हामीलाई जेनतेन बचाएकै छन् । धन्य होस् यी सेवी हातहरुको ! यस्तो कहर भोग्नु के नै रहर थ्यो र हाम्लाई ! कोठामै बसौँ भने भोकै मरिने डर ।
सहराँ आश नपाएसि कतै बाँचिन्छ कि घर पुगेर भन्ने झिनो आशामा । हिँडेको हिँड्ये छौँ कम्रेड ! प्रिय कम्रेड ! तिमी त्यै भएर भन्दै छौ होला बारम्बार नबिराइ निरन्तर ! जो जहाँ त्यो त्यहाँ नै । यो एउटा सत्य हो । तर जहाँको त्यहीँ बस्नेप्रति अलिकति पनि समवेदना खै ? बोलेरै चिउरा भिज्ने भए त ! तिमी सरकाराँ केका लागि ? कसका लागि ? हो, अब मलाई नि भन्न मन लाग्यो । न तिमीले चामलका बोरा जम्मा पार्नु छ, कोठामै मार्र्सी आइपुग्छ । न ग्यास बोक्नु छ, कालो अनुहारको मनुवाले भान्छामै पुर्याइदिन्छ । पैसाको त के खाँचो…!
सप्लायर्सले कमिसन बचाइदिन्छ । राहत बाँड्ने तिम्रै छन् । आहत बाँड्ने तिम्रै । अनि किन नबस्नु ? मैलै सडकमा आउँदा तिम्राले हाँसो उडाउँदा हुन् । चेतना नभएका ग्वार भन्दा हुन् । मुखाँ नि टालो लगाएनन् भन्दा हुन् । कहाँबाट लाउनु पेट आलो भएसि मुखाँ ! हो, मलाई पनि थाहा छ कोरोना सर्छ हुलमुलले । तर के गर्नु ? तिम्रो सहराँ भोकै मर्नुभन्दा त गाउँ नै जाती भनेर हिँड्या हिँड्यै छु सडकमा ।
भोक भोकै पुगिन्छ वा मरिन्छ था छैन कम्रेड ! प्रिय कम्रेड ! यी वास्तविक कथाहरू सुनिदै या देखिदै छन् कि छैनन् महलबाट । छन् भने त तिमी पनि मनुवा नै हो । हिजो त बेला बेला भावुक हुन्थ्यौ । आँसु झाथ्र्यौ । सुखदुःखमा साथ दिन्छु भन्थ्यौ । तर खै सिंहदरबार पसेसि किन जड भयौ था छैन ।
कसरी जड बन्यौ तो पनि था छैन । कतै सप्लायर्स र ट्रेडर्सले मिठ्याएर पो हो कि ? आफू अघि सर्नुपर्नेमा स्थानीयलाई जिम्मा दियौ । दिनु त ठीकै छ तर खै समन्वय ? तिनले छाप हान्नेलाई चिने । घराँ झण्डा हुनेलाई चिने । मैले नि घरबेटीले मागेजतिको भाडा तिरी घरबहाल करमा सघाएकै छु । अन्य पसलको व्यापार बढाउन व्यापारिक कर तिर्नमा सघाएकै छु । अनि राहतमा म कसरी अयोग्य ठहरिए ? कम्रेड ! प्रिय कम्रेड ! तिमी काँ छौ अचेल ? के गर्दै छौ यतिबेला ? निकै भो नभेट्या ! सुन्दै छु तिमी गहन छलफलमा जुट्या छौ रे ! नीति कोर्नमा तल्लीन छौ रे ! तर कहिलेसम्म ? विपत् टरेसि ? दायाँ बायाँले लकडाउन सफल भा’छ भन्दा हुन् खै किन हो ? तिमी सिंहदरबार पसेसि बाहिरको दुनियाँ त बिसिर्यौ कि ? किन गुप्तबास भयौ ? मलाई याद छ, तिमी सँगसँगै मुन्छेका मुहार बदल्न हिनेको ।
ती गाउँका झुपडीमा ढिँडो खाको ! गिट्ठा भ्याकुर खाएनि परिवर्तनको तिम्रो सुनौलो सपनाले हप्तौँ काटिन्थ्यो । कम्ता जोसिला थिए ती पलहरू ! तिम्रो दर्शन पाउँदा नि मभित्र अन्याय अत्याचारविरूद्ध ज्वाला दन्किन्थ्यो । तिमीले भन्ने गरेका विरोधीका किल्लाहरू आगोको लप्का बनी डढाउँ कि जस्तो हुन्थ्यो, तिम्रा प्रत्येक शब्द शब्दमा मुठ्ठी कसिन्थ्यो । खैर किन हो था छैन । सपना पनि देखिन्थे तिम्रै भावभङ्गीका र देशको मुहार फेरिएको । विकासले काँचुली फेरेको झुपडीविहीन गामबेँसीका । यस्तै यस्तै ।
तर आज म सडकमा बहुलाएँ कि भोकले रन्थनिएँ कि ? प्रिय पनि अप्रिय लाग्दैछ । यस्तो बिचल्लीमा म तिमीलाई सम्झिन पुगेँ । हिँड्दा हिँड्दै तिमीलाई मथिङ्गलमा खेलाउँदै । तिमी किन यति विघ्न गुप्त रह्यौ ? मात्र टिभीका पर्दामा देखिन्छौ कम्रेड ! प्रिय कम्रेड ! तिमी आलोचना गर्दा फरक सम्झिन्छौ । मेरो गुणगान गाउ भन्छौ । भोको पेटमा म गाउँ कसरी ?
गरेका कार्य नै देख्दैनौ भन्छौ । कमिसन मात्रै देखिएसि म के देखूँ ? विपत्को बेला यसरी बेसहारा बनाइदिँदा । म कसरी मेरो अभिभावक भनूँ । तिमी विदेशका कुरा नगर भन्छौ । किन नगरौ विदेशीका कुरा ? आफ्ना नागरिक बचाउन उनीहरु घर घरमा पुग्छन्, चुलो बाल्न सहयोग गर्छन्, घाउमा मलमपट्टी लगाउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्ना नागरिकलाई समस्या पर्छ कि भनेर ‘हटलाइन’ जारी गरी चौबिसै घन्टा उद्धारमा सक्रिय छन् ।
सरकारका प्रतिनिधिका आधा तलब राहतमा खर्च गर्न तम्सिन्छन् । तर यहाँ तीन करोड जनतामा गरिब पहिचान गर्नै सकस छ । मानौँ सबै गरिबै छन् कि ? कम्रेड ! प्रिय कम्रेड ! चाहन्छौ भने समाधान पनि छ । अझै ढिलो भा’छैन । जाग । समस्यामा त सबै छन् । तर वास्तविक समस्यामा परेका वर्ग यकिन गरौँ । सकेको सरकारले गरौँ । बाँकी अरूलाई पनि गुहार गरौँ । थुप्रै सहयोगी हात छन् हामीकाँ । बाटामा हिँडेकालाई सहज व्यवस्थापन गरौँ । अलपत्र नछोडौँ । पीडामा पीडा नथपौँ । देखिएका समस्या तु समाधान गरौँ । ठाउँको ठाउँमा बस्नलाई खानाको व्यवस्थापन गरौँ । अनि नियमको पालन गरौँ । नत्र यो भोक र शोकले के गर्छ भोलि नै थाहा होला ! जय कोरोना !
राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेलाई समर्थन गरेकोमा आङकाजीलाई अध्यक्ष लाक्पाले मुद्धा हाल्ने
भक्तपुर अस्पतालमा सुत्केरीको मृत्यु भएपछि आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको छ। आइतबार साँझ सिन्धुपाल्चोक घर भई चाँगुनारायण नगरपालिका-३ झौखेल बस्दै आएकी सुत्केरीको मृत्यु भएको भक्तपुरका डिएसपी दीपक गिरीले जानकारी दिए। ‘हिजो सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको थियो,’उनले भने,’त्यसैले अहिले अस्पतालले आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेको छ।’ हिजै भर्ना भएकी ती महिलाको डेलिभरी भने सामान्य तरिकाले नै भएको उनले बताए। शिशुको अवस्था भने सामान्य रहेको उनले जानकारी दिए। ‘सामान्य तरिकाले नै डेलिभरी भएको तर केही समयपछि मृत्यु भएको खबर आयो,’उनले भने। उनको आरडिटी परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो। मृत्युपछि ती सुत्केरीको स्वाब परीक्षणका लागि टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको छ। उनको रिपोर्ट भने आउन बाँकी रहेको डिएसपी गिरीले बताए। सुत्केरीको शव भने अहिले अस्पतालमै राखिएको छ।